हामीसित भएका प्रमाण र अनुभवले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौं
Sat, Apr 21, 2018 | 05:50:51 NST
16:03 PM (4 months ago)
काठमाडौं, पुस १३ – सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)को पाँचौं अधिवेशन यही हप्ता सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले चार पदाधिकारी सहित ९ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
सञ्जालमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत १९ वटा संस्था आवद्ध छन् । तनहुँको बन्दिपुरमा सम्पन्न सञ्जालको पाँचौ अधिवेशनबाट सञ्जालको अध्यक्षमा प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का अध्यक्ष समेत रहेका कुलप्रसाद कार्की २ वर्षका लागि चयन हुनु भएको छ ।
सञ्जालको नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्कीसित वैदेशिक रोजगारीका चुनौती, सञ्जालको भावी योजना र कार्यक्रममा विषयमा रीतु थेबेले गरेको कुराकानी ।
सञ्जालको अहिलेको चुनौती के छ ?
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन् । ती समस्या स्थायी सरकार नभएसम्म सञ्जालले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । काम त भइरहेका छन् । तर प्रभावकारिता देखिएको छैन । स्थायी सरकार नहुनुले यो अवस्था आएको छ ।
सञ्जालका सदस्यबिच समन्वय हुनुपर्ने कुराहरुमा केही कमी देखिएको छ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सञ्जाल भनेको वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा संगठन हो । त्यसैले सदस्य संस्थाका कुरालाई पनि जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्यासँग जुध्न सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ ।
सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथितीविरुद्ध जुन हिसावले लड्नुपर्थ्याे, त्यो हुन नसकेको हो ?
सञ्जालले शुन्यबाट काम सुरु गरेको हो । सुरुवातमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने थोरै मात्र संघसंस्थाले काम गर्थे । थोरै संघसंस्थाबाट छाता संगठनका रुपमा सञ्जाल स्थापना भएको हो । समयक्रममा अरु संस्थाहरु पनि जोडिन थाले । ती संस्था वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रबाट काम गर्नेहरु छन् ।
अस्थिर राजनीतिका कारण सञ्जालले सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । कुनै विषयमा तल्लो तहबाट छलफल गर्दै कुरा अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । जब माथिल्लो तहमा पुग्छौं अथवा मन्त्रीपरिषद्सम्म कुरा पुर्‍याउँदा हामीले धेरै काम गरेका हुन्छौं ।
तर नागरिक समाजको आवाज माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउँदा सरकार फेरिने बेला भइसकेको हुन्छ । अर्कातिर सरकारले व्यवस्थित रुपमा तथ्याङ्क राख्ने गरेको पाइएन् । अनि त्यही मुद्दा फेरि शुन्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसले पनि हामीले गरेको काममा कम प्रभाव देखिएको हो । सञ्जालको तर्फबाट प्रशस्तै प्रयासहरु चाहिँ भएका छन् ।
तपाईंहरु उपत्यकामा केन्द्रित भएर काम गरिरहनुभएको छ । संघियतामा काम गर्ने गरी केही तयारी गर्नुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने सबै निकाय पुरानै संरचनामा काम गरिरहेका छन् । सेवा दिने निकायहरु पनि केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित भएको हिसावले नागरिक समाज पनि अलि बढी यतै केन्द्रित छन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि जिल्लाबाट काम गरिरहेका संस्थालाई समावेश गरेका छौं ।
७ वटा प्रदेशमा सञ्जालको पनि उपस्थिती रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो साधारणसभामा पनि छलफल भएको छ । साधारणसभापछि बसेको पहिलो बैठकमा पनि यी कुरामाथि छलफल भएको छ । त्यसका लागि पुरानो रणनीतिक कार्ययोजनामाथि छलफल गरेर नयाँ ढंगले समावेश गर्ने कुरा भएको छ । नयाँ संरचना अनुसार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ ।
छाता संस्थामा आवद्ध संस्थाहरु चाहिँ अघि आउने तर सञ्जालको काम चाहिँ कतै हराएजस्तो भयो । यो कारणले पनि भनेजति काम हुन नसकेको हो ?
त्यसो होइन । सञ्जाल छाता संस्था भयो । सदस्य संस्थाहरुको आआफ्ना कार्यक्रम छन् । आफ्ना कार्यक्रमहरु गरिरहँदा हामीले सेवा उपलब्ध गराउँदा वा सवाल बाहिर ल्याउँदा हामीसँग प्रशस्तै प्रमाण र अनुभव छन् । तिनै अनुभव र प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ती सवालहरुलाई पुर्‍याउने कुरामा सञ्जालमार्फत नै गरिरहेका छौं ।
जस्तो फ्रि भिसा फ्रि भिसा लागु गर्ने कुरा राज्यमन्त्रीले पदावधि सकिने बेलामा निर्णय गरेर जानुभयो । त्यसपछि आएका श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएनन् । विभिन्न विवादका कुरा आए । त्यो समयमा पनि कार्यान्वयनका लागि हामीले कडाईका साथ कुरा उठाएका हौं ।
अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा शुन्य लागतको कुरा उठिरहँदा नेपाल चाहिँ फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कार्यान्यनको विवाद छ । यो भनेको कामदारको सामान्य अधिकार पनि पूरा हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गराउने हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।
एउटा मन्त्रीले निर्णय गर्ने तर दुई तीन वटा मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यो विषयमा फेरि पनि हामी आवाज उठाउँछौं । अब बन्ने सरकारले स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म कामदारलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाको नीतिलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । त्यसमा हामी जहिल्यै चनाखो भएर अगाडि बढ्ने छौं ।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको जस्ता समस्या धेरै छन् । तपाईं नेतृत्वले त्यसका लागि के गर्छ ?
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट सरकारले गरिसकेको निर्णय हो । यसबाट कोही पनि पछाडि फर्कन मिल्दैन । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले न्युनतम लागत खर्च मात्रै तिरेर जानुपर्छ निर्णय उल्ट्याउनु अदालतले वा पार्टी नेतृत्वले जसले गरेपनि त्यो लज्जास्पद हुन्छ ।
हामीले त प्रगतिशिल भएर त्यो भन्दा पनि धेरै सेवासुविधा दिएर कामदारलाई सहज ढंगले विदेश पठाउनुपर्छ भनेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा खर्च कम भयो भने देशका लागि पनि त्यो आम्दानी सरह हो । रेमिट्यान्स पठाउँदा ऋण तिर्नका लागि होइन कि उनीहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी भूमिका खेल्न सक्छ ।
अहिले त विदेश जानेले २/३ वर्षमा कमाएको पैसा ऋण तिर्न मात्रै ठिक्क भएको छ । पैसा नतिरिकन जाने वातावरण बनाउने हो भने उनीहरुले विदेश पुगेको एक महिना देखिनै कमाएको पैसा उत्पादनमुलक ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्थे । त्यो वातावरण बनाउन हामी प्रयास गरिरहेका छौं ।